Michael Jackson, Mambo wePop Las Vegas zuva rekuzvarwa patsva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Michael Jackson, Mambo wePop Las Vegas zuva rekuzvarwa patsva
Kuputsa Kufamba Nhau • Fashoni Nhau • LGBTQ • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Michael Jackson Mutambo weKutamba 2021
Michael Jackson, Mambo wePap angave ave nemakore makumi matanhatu nematatu nemusi weSvondo. Uyu waive mukana wakanaka wekuonwazve muLas Vegas kuCirque du Soleil.
Akapihwa zita rekuti "King of Pop", anoonekwa semumwe wevanonyanya kukosha mutsika dzezana ramakore rechi20. Anopfuura makore mana emakore basa, zvipo zvake kumimhanzi, kutamba uye fashoni, pamwe nehupenyu hwake hwehukama, zvakamuita iye wepasi rose mutsika dzakakurumbira.
Zvakanzwa Michael Jackson achienda kumutambo wake wega apo Cirque Du soleil pamwe chete neThe Estate yaMichael Jackson vakapemberera zuva rekuzvarwa kwa "King of Pops". Michael Jackson angadai ave nemakore makumi matanhatu nematatu.
Mhemberero yekuzvarwa kwevhiki yekuzvarwa yakatanga neMugovera, Nyamavhuvhu 28, iine #MyMJMoves dambudziko rekutamba, rakatongwa nemunyori uye director weMichael Jackson ONE, Jamie King, uye vachiratidza vanyori vekunyora, Rich uye Tone Talauega.
NeSvondo, Nyamavhuvhu 29, 2021 vakapinda vakakwanisa kusangana naMichael Jackson mugadziri wenguva refu wenguo uye munyori we "The King of Style: Kupfeka Michael Jackson," Michael Bush panzvimbo yepedyo kusaina.
Mhemberero dzezuva iri dzakaratidza yakasarudzika Q&A ine mukurumbira director uye choreographer, Kenny Ortega, mukucherechedza kuri kuuya kwegore rechimakumi maviri nemashanu re "HIStory World Tour," yakatangwa musi waGunyana 25, 7.
Ortega akabatanidzwa pachikuva nenhengo dzeMichael Jackson ONE timu yekugadzira, Travis Payne, Jamie King, Rich naTone, avo vese vakashanda naKenny Ortega naMichael Jackson. Kuita kushamisika kwaive mutambi waMichael wemakore makumi matatu, Jonathan “Sugarfoot” Moffett, uyo akabatana neboka iri mukugovana zvisingakanganwike uye zvinokurudzira nguva dzekushanda naMichael.
Varipowo uye vaifarira zviitiko zvemasikati aive mwanakomana waMichael Prince pamwe nehama dzake dzinoverengeka uye nhengo dzemhuri. Zviitiko zvezuva zvakazoguma nemunhu wese, kusanganisira mwanakomana mudiki waMichael, Bigi, kujoina munin'ina wake uye dzimwe nhengo dzemhuri uye vateereri-vakatengesa kwekuita nesimba-guru kwaMichael Jackson ONE. Vatambi vematiketi pamutambo uyu zvakare vakave nemukana wekusangana nevamiriri kubva kuThe Estate yaMichael Jackson, kusanganisira ivo vatori vechikamu mumitambo yemasikati.